विधिको शासनका लागि संसद् पुनर्स्थापना गर्नुस् प्रधानन्यायाधीशज्यू !
- शिशिर ढकाल | काठमाडौं,
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनर्स्थापनको माग गर्दै १३ वटा रिट निवेदन परेका छन् । निवेदनमा बुधबार सुनुवाइ भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एकल इजलासमार्फत ती रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाए ।
रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानले बहस गरेका थिए । बहस गरेकाहरूको सार थियो, 'श्रीमान् संविधानलाई सम्झेर फैसला गर्नुस् ।'
उनीहरूको माग थियो, 'प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संविधानमाथिको धोका हो । यसलाई खारेज गरियोस् । प्रजातन्त्र जोगाउनुपर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेको छ । संविधानमाथि धोकाधडी भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय खारेज होस् ।'
अदालतले आफ्नो निर्णयमा सघाउ पुर्‍याउने जनाउ प्रधानन्यायाधीश राणाबाट मिलेपछि ओलीले संसद् विघटन गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । 'जननिर्वाचित सरकारले चालेको कदममा अदालतको अर्को व्याख्या हुँदैन,' प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो भनेपछि मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय ओलीबाट भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ । संविधानमा संसद् विघटनको प्रावधान नभएकाले संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग सर्वत्र छ । अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ अब संवैधानिक इजलासले गर्नेछ ।
संवैधानिक इजलासले कस्तो फैसला गर्ला भन्ने सबैतिर चासो व्यक्त भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले बुधबार महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सामुन्नेमा उनले अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिए, 'विधिको शासन प्रत्याभूतिका लागि न्यायपालिका कटिवद्ध र गम्भीर छ ।'
यो बेला असंवैधानिक काम गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले विधिको शासन मिचेका छन् । 'मैदान मासेपछि खेल कहाँ खेल्ने' भनेका ओलीले मैदान मासिसकेका छन् । उनले नागरिकको भरोसा र अपेक्षामाथि तुषारापात गर्दै फेरि जनताबीच जाने निर्णय लिएका छन् ।
अब जनताको आशा न्यायपालिकामाथि छ । किनकि न्यायपालिकाको फैसलाबाट मात्रै जनप्रतिनिधिको थलो संसद्ले जीवन पाउनेछ । बुधबार राणा आफैँले भनेका छन्, 'आमनागरिकको आस्था र विश्वासबाट नै न्यायपालिका जीवन्त रहन्छ ।'
अब जनअपेक्षाअनुसार फैसला गर्दै न्यायपालिका जीवन्त राख्ने काम जबराबाट होला वा नहोला भन्ने द्वविधा अझै पनि कायम छ । अदालतमा एकै प्रकृतिबाट विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापित भएको र नभएको दुवै नजिर छ ।
यता, अर्को अभ्यास पनि छ, प्रधानन्यायाधीश आफैँले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेको । अहिले दोस्रो विकल्पतर्फ राणाका कदम अग्रसर रहेको न्यायिक वृत्तमा चर्चा छ । उनले भनेजस्तै अभिभारा उनकै काँधमा छ, 'विधिको शासन प्रत्याभूत गर्ने र न्यायपालिकामाथिको जनविश्वासलाई जीवन्त राख्ने ।'
यो संसद् विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गर्दा मात्रै सम्भव छ । भनिन्छ, अदालतले न्याय होइन, फैसला मात्रै गर्छ । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले अब जनअपेक्षामाथि न्याय गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संसद् पुनर्स्थापना गरेर साँच्ची नै विधिको शासन प्रत्याभूत गराउनुस् प्रधान्यायाधीशज्यू !
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ८, २०७७, १९:१०:००